DAAWO: Gattuso oo farriin muuqaal ah ugu mahadceliyay Ancelotii & xiddigihii ay… – Gool FM
DAAWO: Gattuso oo farriin muuqaal ah ugu mahadceliyay Ancelotii & xiddigihii ay…
Raage January 10, 2018
(Milano) 10 Jannaayo 2018 – Macallinka AC Milan ee Gennaro Gattuso ayaa qirtay inuu war iska waayay markii uu helay farriinta uu usoo diray macallinkiisii hore ee Carlo Ancelotti oo ugu hambalyeeyay sanadkiisii 40-aad ee dhalashadiisa.
Ancelotti ayaa Gattuso ku tilmaamay “nafta AC Milan” mar uu warqad furan usoo qoray, taasoo uu daabacay Gazzetta dello Sport, wuxuuna Gattuso macallinkiisii hore iyo laacibiintii sxbadii ahaaba ugu jawaabey si kalgacal leh.
“Saaxiibada qaaliga ah, hambalyadiinnu way i taabatay, waxaa la igu qarqiyay farriimo, waad mahadsan tihiin maxaa yeelay markii aan laacibka ahaa waad ila joogteen haatan oo aan macallin ahayna waad i haleesheen,” ayuu yiri Gattuso.
“Ugu dambayn, maxaan ka dhihi karaa warqaddii Carlo ee aan akhriyay, waxaan wada ahayn nafta Milan, waxaannu kaala nimid Istanbul, waxaana dartaa u aadney Athens. Jacayl badan, Rino-hiinna.” ayuu kusoo afjaray.
GOOGOOSKA: Real Madrid vs Numancia 2-2 (Real oo ribanaysa)
Shan ciyaaryahan ee Brazil ugu wacnaa ee soo mara Barcelona